သတိပါတဲ့ စကားတစ်ခွန်းမှာ..အမှားမပါတော့ ဘူး..
စာနာမှုပါတဲ့ အချစ်တစ်ခုမှာ..နာကျင်စေတာမပါတော့ ဘူး..
ဥပေက္ခာပါတဲ့ လမ်းခွဲခြင်းမှာ..အမုန်းဆိုတာမရှိတော့ ဘူး..
အပြုံးလေးတစ်ပွင့် ဖန်တီးဖို့10seconds ပဲကြာမြင့်ပါတယ်..။
လူတစ်ယောက်ကို 10seconds မျှဝေဖို့မနှမြောပါနဲ့ နော်.။.
''၂၀၁၁'' ဆိုတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် မကြာခင်မှာပြီးဆုံးပါတော့ မယ်..။
စာမျက်နှာတွေ ပြည့် ခဲ့ ပါပြီ..။
''၂၀၁၂'' ဆိုတဲ့ ဘဝစာအုပ် အသစ်စတင်ရေးရပါတော့ မယ်...။
ဘာမှမရေးရသေးတဲ့စာမျက်နှာအသစ်ကလေးတွေစောင့်ကြိုလို့ ..
စရေးရမယ့် စာမျက်နှာတိုင်း..ရင်ခုန်ခြင်းများစွာနဲ့ ..
မင်းလွယ်ထားတဲ့မာနတရားတွေ..
လူတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ဘတ်တစ်စုံဟာ..
စိုက်ခင်းဥယျာဉ် မြေကွက်ကြီးတစ်ခုနဲ့ တူတယ်..။
ဒီရင်ဘတ်မှာ သိပ်လှမွှေးထုံတဲ့ .
အလေးအနက် ဂရုတစိုက်တန်ဖိုးထားခြင်းဆိုတဲ့ ..
တန်ပြန်အကျိုး သက်ရောက်တတ်တယ် ဆိုတာပါပဲ ..။
ဒီနေ့..သမီးလေးက ကျွန်မကို မေးခွန်းတစ်ခုမေးလာပါတယ်..။
''မေမေ..ဘဝမှာ အရေးအကြီးဆုံးကဘာလည်းဟင်..'' တဲ့ ..။
ကျွန်မ ရိုးရိုးကလေးပဲ ဖြေလိုက်မိပါတယ်..။
''ဘဝမှာ အရေးအကြီးဆုံးက ပျော်ရွှင်မှုပါ..'' လို့ ..
ပျော်ရွှင်မှူနဲ့မထိုက်တန်သူကတော့ ..
သူ့အလိုလို ရှောင်ကွင်းသွားပါလိမ့်မယ်.''လို့ ..။
ညစ်ပေသွားတဲ့ အရာကို ပြန်သန့်စင်ဆေးကြောလို့ ရပါတယ်...
ပျက်ဆီးသွားတဲ့ အရာကို ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့ နည်းနည်းခက်ပါတယ်..
ကိုယ့် စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေ တစ်ခါတစ်ရံ ညစ်ပေချင်ညစ်ပေနိုင်ပါတယ်..
.စိတ်ဓာတ်ကလေးသာ မပျက်ဆီးပါစေနဲ့ .
တစ်ဖက်သားကို အမုန်းနဲ့လောင်ကျွမ်းစေနိုင်သလို..
ကြည်နူးပီတီနဲ့အေးမြစေနိုင်စွမ်းပါတယ်.။
ကိုယ့် ရဲ့ ရွေးခြယ်မှုအပေါ်မှာပဲ မူတည်တာပါ..။
ကိုယ့် ရင်ထဲကို သူ့ရဲ့ မြှားနဲ့ ထိုးစိုက်ခံထားရသလိုပါ..
ရင်ထဲပေါ့ ပါးလွတ်မြောက်သွားတာ.မရှိတော့ ပါ..။
အရာရာကိုရင်ဆိုင်ဖို့အမြဲအဆင်သင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်..။
လူတစ်ယောက်ကို ပြောင်းလဲဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ..
လိုက်လျောညီထွေ ဆက်ဆံပေါင်းသင်းလို့ မဖြစ်နိုင်တော့ တဲ့ အခါ..
ချစ်မြတ်နိုးခြင်းတွေ ဆွဲသီထားတဲ့ လည်တိုင်ဆီ..
ဒီနေရာမှာ ၀င်ရောက် Download ရယူပါ။
Labels: လုံးချင်းဝတ္ထုသစ်မိတ်ဆက် , ဝတ္ထုရှည်
ကိုယ့် ဘဝကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိသူတွေပါ..
တချို့ က လှေခါးထစ်တွေနဲ့ တူတယ်..
ကိုယ့် ဘဝကို မြင့်မားအောင် မြှင့်တင်ပေးတတ်တယ်။.
တချို့ က..ကပ်ကြေးနဲ့ တူတယ်..
ကိုယ့် ဘဝကို တစ်စစီ..မွစာကြဲစေတယ်..
တချို့ က..ရေတံခွန်နဲ့ တူတယ်..
ကိုယ့် ဘဝအမောတွေပြေလို့ လန်းဆန်းအေးမြစေတယ်..
တချို့ က..မီးလျှံနဲ့ တူတယ်...
ကိုယ့် ဘဝတစ်ခုလုံးကို လောင်ကျွမ်းပစ်လိုက်တယ်.။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ခင်မင်ခွင့်မရှိတာဟာ..ရေစက်မပါခဲ့ လို့ ပါ..။
ချစ်ခင်ပြီးမှ လမ်းခွဲလိုက်ရတာဟာ..ရေစက်ကုန်သွားလို့ ပါ..။
တစ်သက်တာ ထာဝရ လက်တွဲခွင့်ရခဲ့ တာဟာ..ရေစက်အပြည့် ပါခဲ့ လို ပါ..။
ခင်မင်ခွင့်မရှိလို့ကြေကွဲစရာမလိုသလို..။
ရေစက်အပြည့် ပါသူတစ်ယောက်တော့ရှိနေမှာပါ..။
သူတစ်ပါးက ကိုယ့် ကို ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆမလဲဆိုတာကို..
ကိုယ် ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကြိုးစားသက်သေပြနှိုင်ဖို့ က..
အလွယ်တကူ တောင်းခံယူလို့ ရတဲ့ အရာမျိုးမဟုတ်ပါ...။
ကိုယ့် ဘက်က ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရင်းနှီးပေးဆပ်ပါမှ..
တစ်ဖတ်က ကြည်ဖြူစွာ ပြန်ကမ်းလင့်လာတဲ့ ..
နောင်ဘယ်တော့ မှ ပြောခွင့်မကြုံတော့ ဘူးဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးနဲ့ ..
နောင်ဘယ်တော့ မှ ပြုံးပြခွင့်မရှိတော့ ဘူးဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုးနဲ့ ..
နောင်ဘယ်တော့ မှ..ချစ်ခွင့်မရှိတော့ ဘူးဆိုတဲ့ မက်မောမှုမျိုးနဲ့ ..
ကိုယ့် အတွက် အသေးအမွှားကလေးလို့ ထင်မိပေမယ့် ..
ကိုယ့် အတွက် သိပ်ကြီးကျယ်ခမ်းနားနေတဲ့ ..
တစ်ပါးသူအတွက် သေးဖွဲနေနိုင်ပေမယ့် ..
နှလုံးသားဆီသို့ လျှို့ ဝှက်တံခါး.
အသက်ငါးနှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့ သမီးကလေးက သူ့ရဲ့စာရေးစားပွဲမှာ စမတ်ကျကျထိုင်ပြီး စာရေးနေတာမို့ ကျွန်မက စပ်စပ်စုစုနဲ့လှမ်းမေးမိပါတယ်။
ဆိုတော့ သူကလေးက ဣနြေ္ဒတစ်ခွဲသားနဲ့ ပြန်ဖြေတာက
`I am writing about Secret of Love’
တဲ့လေ။ ကျွန်မမှာ ကြားကြားချင်း မျက်ခုံးတွေပင့် မျက်လုံးတွေပြူးပြီး အရမ်းလည်း စိတ်ဝင်စားသွားမိပါတယ်။
`What is Secret of Love သမီးလေး´
လို့ ရယ်ချင်တဲ့စိတ်ကို အသာမြိုသိပ်ပြီး စိတ်ဝင်တစားမေးမိလိုက်တော့ သူကလေးက မှင်သေသေမျက်နှာပေးနဲ့ ကျွန်မကို သူ စာရှင်းပြရမယ့် တပည့်ကလေးတစ်ယောက်လို ကြည့်ပြီး မျက်ခုံးကလေးပင့်ကာနဲ့ `Secret of Love means A man lovesawoman. But they didn’t marry, they love eachother. That is Secret of Love.’ လို့ ကျွန်မကို ရှင်းပြပါတယ်။ ကျွန်မမှာ အံ့သြလွန်းလို့ စကားတောင် ပြန်မပြောနိုင်ပါ။ အဲ့ဒါ သူပြောတဲ့အတိုင်း ကျွန်မရေးပြတာ။ ဘယ်သူတွေ ယုံနိုင်ပါ့မလဲ။ အသက်ငါးနှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ယောက် ဒီလိုအတွေးမျိုး ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ ငါးနှစ်သမီးအရွယ်တုန်းက ဘာပြောမှန်းတောင် သိမှာမဟုတ်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို သမီးလေးဆီက ကြားတော့ ကျွန်မမှာ အံ့လည်းသြ ရင်သပ်ရှုမောစွာလည်း ခံစားရပါတယ်။ ဒီခေတ် ကလေးတွေ တတ်သိလိုက်ပုံများ မလွယ်ပါလား။
`နေပါဦး… သမီးက အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သိနေရတာလဲ´
လို့ ထပ်မေးတော့ ပြုံးစိစိမျက်နှာပေးနှင့်….
`I’m just thinking in my head.’ တဲ့…
`ဟုတ်တယ် မေမေ´ တဲ့။ ပြီးတော့ ကျွန်မကို Secret ရဲ့ စာလုံးပေါင်းမေးပြီး သူ့စာအုပ်ထဲ ချရေးနေတော့တာ။ ဒီအကြောင်း မောင့်ကိုပြန်ပြောပြတော့ မောင်က အမလေးဆိုပြီး ရယ်လို့မဆုံး။ ခုချိန်ကတည်းက သမီးကလေးကို အရိပ်တကြည့်ကြည့် နဲ့ သူဘာကို စိတ်ဝင်စား အားသန်မလဲဆိုတာကို သိချင်နေမိတဲ့ ကျွန်မအတွက်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပေါ့လေ။ သမီးကလေးဟာ ကျွန်မလိုပဲ စာရေးခြင်းကို မက်မောတွယ်တာလာမည့်သူလား။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်မသူ့ကို စနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးချင်မိပါတယ်။ သမီးလေးက အတွေးသမား၊ သူ့ကြည့်လိုက်ရင် တွေးနေတတ်တာက များပါတယ်။ ပြီးရင် မေးခွန်းတွေ အမြဲတမ်းမေးလေ့ရှိသူမို့ သူနားလည်အောင် ကျွန်မမှာ ကြိုးစားပြီး ဖြေပေးရပါတယ်။ စာအုပ်တွေဖတ်တာ နှစ်သက်သူကလေးမို့ အားရင် စာအုပ်ကလေးတွေ အမြဲတမ်းဖတ်နေတတ်ပါတယ်။ အိမ်သာထိုင်ရင်တောင် လက်ထဲမှာ စာအုပ်ကလေးနဲ့မို့ သူ့ပုံစံကလေးကြည့်ရတာ လူကြီးပေါက်စကလေးလို အရင့်ကျက်လွန်နေပါတယ်။ ဒီအရွယ်ကလေးနဲ့ ဘယ်သူက ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုး ရှိတယ်ဆိုတာကို သူကိုယ်တိုင် ဉာဏ်ကလေးနဲ့ သုံးသပ်ပြတတ်ပါတယ်။ တစ်ရက်တော့ သမီးကလေး ကျောင်းကအပြန် သူ့ကို မေးကြည့်မိပါတယ်။
`သမီးလေး ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေက သမီးလေးကို ချစ်ကြရဲ့လား Are they kind to you? ‘Yes, they are. But actually, they are pretending.’ တဲ့။ ပြီးတော့ ခေါင်းကလေး တဆတ်ဆတ်ညိတ်ကာနဲ့ ‘I know, I really know.’ လို့ ဆက်ပြောပါတယ်။ ကျွန်မမှာ ဘာပြောရမှန်းမသိ။ ကလေးတွေဟာ ဟန်ဆောင်တတ်ပါ့မလား။ ကလေးချင်းကော ဟန်ဆောင်နေတာပါလို့ သမီးလေးက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သေချာပြောနိုင်ပါသလဲ။ အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်မအတွက် တွေးစရာပါ။ ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ သူငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်း ဒီလိုပဲ ပေါင်းသင်းခဲ့ကြတာ။ သူတို့ ကျွန်မကို ခင်မင်ဟန် ကြင်နာဟန်ဆောင်ခဲ့ကြသလားဆိုတာ။ ကျွန်မ အမှန်တကယ်မသိခဲ့။ သမီးကလေးကတော့ သူ့ကို ဘယ်ဆရာမက ဘာပြောတာ ဘယ်လိုပြောတာ ဘယ်သူငယ်ချင်းက ဘယ်လိုဆက်ဆံတာ စသဖြင့် အသေးစိတ်ကို စုံစုံစေ့စေ့ ပြန်ပြောပြတတ်တာမို့ ကျွန်မမှာ သူ့ကျောင်းက ဆရာမတွေ ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုး ရှိတယ်ဆိုတာကအစ သူ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးရဲ့နာမည်တွေနဲ့တကွ စိတ်ထားကလေးတွေကိုပါ သိခွင့်ရနေခဲ့ပါတယ်။ သမီးကလေးကို ကျွန်မက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လို တရင်းတနှီးပေါင်းပြီး သူ့ရင်ထဲမှာရှိနေတာ စိတ်ထဲမှာရှိနေတာလေးတွေကို အမြဲတမ်း မျက်ခြေမပြတ်လေ့လာနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သမီးလေးကပြောတာပါ ‘May May, You’re my best friend. We will never ever break up.’ တဲ့လေ။
တစ်နေ့ကတော့ ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိပါ။ ပြတင်းပေါက်ကနေ သူ့ဖေဖေ အလုပ်သွားတာကို ငေးကြည့်ရင်း သမီးလေးက စကားတစ်ခွန်းဆိုလာပါတယ်။
‘May May, You’ve gotawonderful husband.’ တဲ့။ ကျွန်မက အံ့သြလည်းသြ၊ ရယ်လည်း ရယ်ချင်စွာနဲ့…
`သမီးက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သိတာလဲ´လို့ ပြန်မေးမိပါတယ်။
‘Phay Phay always plays with me and he always helps you.’ လေ။
`အေး… ဟုတ်တာပေါ့ သမီးရယ်။ မေမေ ကံကောင်းတာပေါ့နော်´ လို့ ကျွန်မပြန်ပြောတော့ သူက သဘောတွေကျလို့လေ။ သမီးက ကျွန်မနဲ့သူ့ဖေဖေမှာ သူ့ဖေဖေဘက်က ပိုလိုက်ပေးတတ်ပါတယ်။ တစ်ရက်တော့ ကျွန်မက မောင့်ကို စိတ်ကောက်ပြီး စကားမပြောဘဲ နေမိပါတယ်။ မောင်ဆေးခန်းကနေ ဖုန်းဆက်ရင်လည်း ကျွန်မမဖြေဘဲ သမီးကိုသာ ကိုင်စေပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုပဲ သူကလေးခမျာ သူ့ဖေဖေကိုယ်စား မခံမရပ်နိုင်တွေ ဖြစ်နေတော့တာ။ မျက်ခုံးကလေး ပင့်ကာ ပင့်ကာနဲ့ ကျွန်မကို ကြည့်ပုံရှုပုံက အပြစ်ရှိတဲ့ကျောင်းသူကလေးကို ကြည့်တဲ့ ကျောင်းဆရာမ စတိုင်လ်မျိုးနဲ့ပါ။
`မေမေ… Why don’t you speak my Phay Phay?’ တဲ့ စမေးပါတယ်။
`ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မေမေသူ့ကို စိတ်ဆိုးနေလို့ပေါ့ သမီးရဲ့´
`Why? Phay Phay is your husband. လေ… You should say sorry to him and hug him when he comes back နော်´ လို့ လူကြီးသူမ လေသံနဲ့ ကျွန်မကို သွန်သင်ဆုံးမနေတာမို့ ကျွန်မမှာ ရယ်ချင်မိပါတယ်။
`အို… တောင်းပန်နိုင်ပါဘူးအေ… သမီးဖေဖေက တစ်ခါတလေ naughty ဖြစ်တယ်။ မေမေ စိတ်တိုနေပါတယ်ဆိုနေမှ´
‘Although he might be naughty sometimes, but he is so kind. You shouldn’t mad at Phay Phay.’ တဲ့။ သူကလည်း အလျှော့ကို မပေးတာ။ ဖုန်းလာလို့ ကျွန်မမကိုင်ဘဲနေတာကိုပဲ သူ့မှာ အသည်းတွေယားနေတဲ့ပုံ။ ကျွန်မမှာ စိတ်ကောက်တာတောင် စိမ်ပြေနပြေ မကောက်နိုင်အားပါဘူး။ သူ ကြားဝင်ဖြန်ဖြေနေတာနဲ့ပဲ ရယ်ချင်မိတော့တာ။ ဖုန်းဆက်လာတဲ့ သူ့ဖေဖေကိုလည်း
`ဖေဖေ… မေမေ doesn’t want to tell you at the moment. She’s still allergic to you.’ လို့ ပြန်ပြောရင်း ‘Oh! Poor ဖေဖေ´ လို့လည်း ညည်းပါသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ကောက်ခြင်းက သက်တမ်းမရှည်နိုင်တော့ဘဲ ရယ်မောခြင်းနဲ့အတူ ပြယ်လွင့်ရတော့တာပါလေ။
တစ်နေ့ကတော့ ခြံထဲမှာ ကျွန်မက စာဖတ်နေရင်း သမီးလေးက သူ့ဘာသာသူ ဒန်းကလေးစီးရင်း သီချင်းတစ်ပုဒ်ကောက်ဆိုနေသံကို အမှတ်တမဲ့ ကျွန်မနားထောင်လိုက်မိပါတယ်။ စာသားလေးတွေက ချစ်စရာ…
‘This is me. This is you. I’m the only one who hold your hands.
This is me. This is you. I’m the only one who touch your heart.’ တဲ့။ ဒီသီချင်းကို ကျွန်မ တစ်ခါမှ မကြားဖူးတာမို့ `ဟဲ့ သမီး အဲဒါ ဘယ်သူ့သီချင်းလဲ။ မေမေလည်း တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါလား´ လို့ မေးလိုက်တော့ သူကလေးက ပြုံးစိစိမျက်နှာကလေးနဲ့ ကျွန်မကို ပြန်ပြောပါတယ်။
`အဲ့ဒါ မီးလေး Song လေ´
`ဘာရယ်… မီးလေးရဲ့ သီချင်းလား။ မီးလေး ဘာသာ စပ်လိုက်တာလား´
`အင်း… ဟုတ်တယ် မီးလေးဘာသာ ဒီအတိုင်းပဲ ဆိုလိုက်တာ´ တဲ့။
ဖြစ်နိုင်တာက သူ့ခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့ စာသားကလေးကို လက်တန်းစပ်ဆိုလိုက်တာ ဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်မမှာတော့ မျက်ခုံးတွေပင့် မျက်လုံးပြူးလို့။ ဒီခေတ်ကလေးတွေ အတတ်မြန်ပုံများ အံ့သြစရာကြီးပါလားပေါ့။ ကျွန်မတို့ ငါးနှစ်သမီးအရွယ်တုန်းက သီချင်းစပ်ဖို့ မပြောပါနဲ့၊ သီချင်းတောင် သိပ်နားထောင်တတ်လှတာ မဟုတ်။ အခုတော့ ကျွန်မရဲ့ ငါးနှစ်အရွယ်သမီးကလေးက အချစ်သီချင်းတွေ ဘာတွေ စပ်လို့ပါလား။ သူကလေးက သီချင်းတွေလည်း အရမ်းကြိုက်တာ။ သေသေချာချာ နားထောင်လေ့ရှိတာမို့ သီချင်းစပ်ဖို့ စိတ်ကူးပေါ်လာတာလည်း ဖြစ်မှာပါ။
`သမီးရယ်… သမီးက ငါးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ သီချင်းတောင် စပ်တတ်နေပြီလား။ ကဲ ဆက်ဆိုပါဦး။ မေမေ ဗွီဒီယို ရိုက်ထားပေးမယ်´
ဆိုပြီး ကျွန်မက iphone ကလေးနဲ့ ဗွီဒီယိုရိုက်ယူထားတော့ သူက ဟန်ပါပါ မာန်ပါပါနဲ့ သီချင်းကို စိတ်ကူးပေါက်သလို လက်တန်းဆက်ဆိုနေပါတော့တယ်။ အာခေါင်ခြစ်ပြီး… ‘This is me. This is you.’ ဆိုတာကိုလည်း ဆိုသေးရဲ့။ သူ့ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မ လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ် ပြုံးမိပါတယ်။ အင်း နောက်ဆယ်နှစ်ဆိုရင်ဖြင့် သမီးလေးကို ကျွန်မလိုက်လို့များ မီနိုင်ပါတော့မလား မသိပါဘူးလေ။
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁ People Magazine
အဲဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးက..
ရှင်သန်ခွင့်ရတဲ့အချိန်တိုင်းကို..
ရင့် ကျက်ခွင့်ပေးတဲ့ ရန်သူကိုလည်း..
ကိုယ့် ကို..ပိုအစွမ်းထက်မြက်စေတဲ့ ..
လူအချို့ က.. အေးစက်တယ်..
တစ်ချို့ က.. နွေးထွေးတယ်..
တစ်ချို့ က.. ရန်လိုငြူစူတတ်တယ်..
တစ်ချို့ က.. လှိုက်လှဲဖော်ရွေတယ်..
တစ်ချို့ က.. အကောင်းမြင်တတ်တယ်..
တစ်ချို့ က.. အပြစ်ရှာတတ်တယ်..
တစ်ချို့က..ပျော်တတ်တယ်..
ကိုယ်..သူတစ်ပါးဆီကနေ မျှော်လင့်တဲ့ အတိုင်း..
တစ်ပါးသူကလည်း ကိုယ့် ဆီကနေမျှော်လင့်နေမယ်ဆိုတာ..မမေ့ပါနဲ့ ..။
သူတပါးရဲ့ စကားကို လေးလေးနက်နက်.. စိတ်ဝင်တစား.
နားထောင်ပေးတာဟာ..သူ့ကိုကိုယ် အကောင်းဆုံးပေးလိုက်တဲ့ ..
နိုဝင်ဘာ၂၈ရက်မှာထွက်မယ့်ကျွန်မရဲ့ စာအုပ်အသစ်ကလေး..
လေးစားသမှုနဲ့ယဉ်ကျေးစွာ တုန့်ပြန်သင့်ပါတယ်...
သူတစ်ပါးက ကိုယ့် ကို..ဆုံးရှုံးနစ်နာစေတဲ့ အခါ..
ကိုယ့် ကိုဆုံးရှုံးနစ်နာအောင် မလုပ်နိုင်ပါ..။
သူတစ်ပါးက ကိုယ့် ကိုထိခိုက်နာကျင်စေတဲ့ အခါ..
ကိုယ့် ကိုထိခိုက်နာကျင်အောင် မလုပ်နိုင်ပါ..။
''Recipe For Love...''
အကြည့်ပွင့်တို့ နှင့် ချိုမြသောအပြုံးပွင့်တို့ ..
ရင်ခုန်သံကို ဖြည့် စွက်ပါ..
တစ်နေ့မှာ..ကိုယ့် ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တဲ့ အတွက်..
သူနောင်တရနေစေမယ့်အနေအထားတစ်ခုရောက်အောင်..
ဘာမှ မဟုတ်တော့ သလိုပါ..
မနက်မိုးလင်းတာနဲ့အပြုံးကလေး နှုတ်ခမ်းပေါ်တင်လို့
ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ..
ဒီစကားက သူ့ကို ပျော်ရွှင်စေမယ်ဆိုရင်...
ကိုယ့် ရဲ့ သံသယတွေနဲ့ ..
ကိုယ့် ကိုယ်ကို ပြန်မနှိပ်စက်ပါနဲ့ ..။
ကိုယ့် ရဲ့အတွေးတွေနဲ့ ..
ကိုယ့် ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို .. မဖျက်ဆီးပါနဲ့ .။
ကိုယ့် ရဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ..
သံယောဇဉ်တွေ များလွန်းတော့ လည်း..
ချစ်ခြင်းရဲ့ ပန်းပွင့်တွေလည်း..ဝေဆာလို့ ..
အောင်မြင်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲလာတတ်လို့ ပါ..
''ကျွန်မရဲ့သူရဲကောင်း..''
ကျွန်မက..''ဖေဖေ'' လို့ ခေါ်လိုက်တိုင်း.
ကျွန်မက..'''.ဖေဖေ'' လို့ ခေါ်လိုက်တိုင်း..
သူဟာ..ကျွန်မရဲ့သူရဲကောင်း..'။
ကျွန်မက ဖေဖေလို့ခေါ်လိုက်တိုင်း..
သူဟာ..ကျွန်မရဲ့သူရဲကောင်း.။
သူဟာ..ကျွန်မရဲ့သူရဲကောင်း.